सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको आइपिओ कतिले भरे? कतिले पाउनेछन सेयर? जानिराखौं – Eps Sathi
May 5, 2021 760
सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले निष्काशन गरेको आइपिओ ब’न्द भएको छ। कम्पनीले गत बैशाख १७ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि २३ लाख ४१ हजार ९ सय ५४ कित्ता सेयर बिक्रीका लागि खुल्ला गरेको थियो। कम्पनीले सनराईज क्यापिटललाई आइपिओको निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धकमा नियुक्त गरेको थियो। आइपिओ निष्काशन ब’न्द बैशाख २१ गते बैंकिङ समयपछि भएको छ।
सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले २ प्रतिशत सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरु तथा ५ प्रतिशत सेयर म्युचुअल फण्डहरुलाई छुट्याइ बाँकी रहेको २३ लाख ४१ हजार ९ सय ५४ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बे’च्न लागेको हो।
सिडिएससीका अनुसार आइपिओमा कुल १७ लाख ३६ हजार ७ सय जना आवेदकहरुबाट २ करोड ६३ लाख ४५ हजार ५ सय कित्ताका लागि आवेदन गरेका छन। यो डाटा आइपिओ ब’न्द भएपछिको हो। यसरी हेर्दा यस कम्पनीको आइपिओ ११.२४ गुणाले ओभरसस्क्राइब भएको पाइएको छ। यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाडमा गोलाप्रथा हुने निश्चित भएको छ गोलाप्रथाबाट भाग्यमानी २ लाख ३४ हजार १ सय ९५ जनाले १० कित्ताका दरले सेयर पाउनेछन। आवेदन गर्नेहरुको संख्या हेर्दा ८ जनामा १ जनाले १० कित्ता पाउनेजस्तो देखिन्छ।
सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले ४.४ मेगावाटको राधी हाइड्रो प्रोजेक्ट तथा ०.१८ मेगावाटको स्यागे खोला हाइड्रो प्रोजेक्ट लमजुङ जिल्लामा बनाइरहेको छ। यसले अन्य ३ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरु समेत बनाइरहेको छ। कम्पनीले ४५ मेगावाटको कसुवा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट सोलुखुम्बु जिल्लामा बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
कम्पनीको आइपिओ बाँडफाड पछि चुक्ता पूँजीमा प्रमोटर पब्लिकको रेसियो ७०:३० हुनेछ। आइपिओ पछि कम्पनीको चु’क्ता पूँजी ८३.९४ करोड हुनेछ।
Prevकोरियामा अब बच्चाहरुले आफ्नो आमाको थर राख्न पाउने
Nextखो’प लगाएकाले अब कोरियामा १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने